DAAWO SAWIRRO: Dibadbax ballaaran oo ka dhan ah Al-Shabaab oo maanta ka dhacay Muqdisho & Mas’uuliyiiin ka qeybgalay | HalQaran.com
DAAWO SAWIRRO: Dibadbax ballaaran oo ka dhan ah Al-Shabaab oo maanta ka dhacay Muqdisho & Mas’uuliyiiin ka qeybgalay
Muqdisho (Halqaran.com) – Kumanaan dadweyna ah oo ka kala yimid degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa ayaa maanta isugu soo baxa ka dhigay dugsiga tababarka ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee Jeneraal Kaahiye, halkaasi oo ay ku muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan falalka gurcan oo ay argagixisada ku xasuuqeyso shacabka Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) oo isu soo baxa ka qeyb galay ayaa kula dardaarmay shacabka reerka Muqdisho inay si mideysan meel ugu soo wada jeestan cirib tirka Al-Shabaab iyo sidoo kale inay si gaar ah ula shaqeeyaan ciidamada amniga.
Isu soo baxan ballaaran ee looga soo horjeeday weerarkii cadawga Ummadda ee Al-Shabaab ka geysatay Ex-koontarool Afgooye ayaa ka qeyb galayaashu waxa ay siteen boorar ay ku qornaayeen hal ku dhigyo ka dhan ah Al-Shabaab iyo in loo baahanyahay wada shaqeynta laamaha amniga.
Dadweynaha isu soo baxay ayaa lulayay Calanka Soomaaliya, waxaana ay ku dhawaaqayeen ereyo ay Cadowga ku cambaareynayaan.
Ugu dambeyn, shacabka isu soo baxay ayaa sidoo kale lulayay Sawirrada Madaxweynaha Dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan, iyagoo ku ammaanay doorkii ay Dowladdiisu ka qaadatay gurmadka loo fidiyay Dadkii ku waxyeelloobay Qaraxii 28-kii December 2019 ka dhacay Ex- Contarol Afgooye.
isku soo bax
ka dhacay Muqdisho
ka dhan ah Al Shabaab